Soomaalida qaadanaysay dhalashada Norwey oo 60% hoos u dhacday sanadkii 2015 - NorSom News
Soomaalida qaadanaysay dhalashada Norwey oo 60% hoos u dhacday sanadkii 2015
Sanadkii lasoo dhaafay waxaa dhalashada Norwey helay dad dhan 12 400 qof oo ajnabi ah, waxaana ugu badan dadka helay dadka ka yimid wadamada Eritrea, Afghanistan iyo Ciraaq.Tirakoobkan ayaa waxaa maanta oo arbaco ah soo saaray wakaalada dhexe tirakoobka dalka Norwey ee SSB(statisk sentralbyrå).
Soomaalida oo kamid ahaan jirtay dadka ugu tiro badan ee hela dhalashada Norwey ayaa sanadkan waxaa ku yimid hoos u dhac balaaran. 450 qof soomaali ah ayaa helay dhalashad Norwey sanadkii 2015, tiradaas oo 60% kayar tirada dadka soomaalida ah ee helay dhalashada Norwey sanadkii 2014 oo ahayd 1150 qof.
Lama garanayo sababta dhabta ee ka danbaysa hoos u dhacan, balse warbaahinta NorSom News oo xiriir la sameysay soomaali kala duwan oo codsaday dhalashada wadanka ayaa sheegay in ay qaarkood jawaabta sugayaan in ku dhow labo sano. Mar walbe ay wacaan UDI-da si ay ugu ogaadaana meesha war marayaana, loogu jawaabo inay sugaan, maadaama uu xiligii sugitaanka jawaabta codsiyada uu dheeraaday sababo la xiriir qoxootigii tirada badnaa ee Norwey yimid 2015. Waxaa kaloo intaas dheer in marka qofka soomaaliga uu codsado dhalashada wadanka ay qaadato waqti ka dheer, dadka intiisa kale, sababtoo ah waxaa adag in documentiyo iyo warqado sax ah laga helo soomaaliya. Taas oo uu u baahan baarid iyo waqti dheeri ah.
Halkan ka fiiri listaha dadka helay dhalashada Norwey iyo wadama ay ka yimaadeen
Previous articleShaqo la aanta soomaalida oo mar kale noqota mid warbaahinta wadanku ay ka hadlaan iyo rajo weyn oo muuqato
Next article8 wiil oo qaar kamid ah ay soomaali yihiin oo lagu maxkamadeynayo Oslo.